ET 302 : Waa'ee gosa xiyyaaraa 'Boeing 737 Max-8' maal beekna? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Gosi xiyyaaraa Boeing 737 Max-8 Dilbata kaleessaa kufee caccabe
Balaan Dilbata kaleessaa, gaafa Bitootessa 10,2019 gosa xiyyaaraa haarawa Boeing 737 Max 8 jedhamuun mudate ji'oota shan keessatti isa lammaffaadha.
Boeing 737 Max 8 erga bara 2017tii hojiirra oolaa jira.
Onkoloolessa darbe gosi xiyyaaraa Boeing 737 Max kan Daandii Xiyyaaraa Lioniin hoogganamu Indooneezhiyaa ,Jakaartaa irraa akkuma balaliinsa eegaleen kufee caccabuun namoonni xiyyaaricharra turan 189 du'aniiru.
Xiyyaarri sun erga hojii eegalee ji'oota sadi qofadha.
Xiyyaarri Itoophiyaa lakkoobsi balaliinsaa isaa 302 ta'es erga balaliinsa eegalee daqiiqaa muraasa booda kufee caccabe.
Xiyyaarri haarofti kun moodela duraan turerraa maaliin adda ta'a?
Xiinxalaan Daandii Balaliinsaa Jakaartaa Gerry Soejatman akka BBCtti himetti ''mootorri yookiin injiiniin gosa xiyyaaraa 'Boeing737 Max' jedhamuu gara fuulduraatti baayyee siqee kan jiruu fi koochoosaarra olka'aa dha. Kun madaala xiyyaaraa irratti dhiibbaa qaba.''
Koreen Nageenyummaa Geejjiba Biyyaalessaa Indooneezhiyaa gosti xiyyaaraa 'Lion Air flight 610' wayita rakkoon teeknikaa mudatu balaliisaa xiyyaaraatti agarsiisuurratti rakkoo qaba jedheera.
Koreen kun hanga sababa rakkoo mudatee adda hin baasne.
Miira dubbistuu yookiin sensor fi mosaajii yookiin software xiyyaara haaraatti hidhamee jiru kan gosa xiyyaaraa Boeing 737 duraan turaniitiin addadha, garuu wanti kun akka jiru balaliistota xiyyaara kanaatti hin himamne.
Lion Air/Balaliinsi qabeenyummaansaa kan Lion ta'e erga kufee caccabee guyyoota muraasa booda Kubbaaniyyaan gosa xiyyaaraa Boeing oomishu barruulee xiyyara kanatti fayyadamuuf gargaaran daandiiwwan xiyyaaraaf raabsee ture.
Dhaabati To'annoo Aviyeeshinii Yunaayitid Isteetis xiyyaarri kun akkaataa daandii qilleensaaf ta'urratti hatattamaan hubannoo kennitee turte.
Abbaan Taayitaa Aviyeeshinii Federaalaa miira dubbistuun yookiin sensor xiyyaara kanaa hin sirratu taanaan tuuti xiyyaara kanarraa hojjetan xiyyaaricha to'achuuf ni rakkatu jedheera.
Huuruun/funyaanni xiyyaara kanaa wayita lafti olka'iinsa dabalaa deemu gadi jechuu, olka'iinsa lafaa waliin madaalaa eeguu dhabuu fi haala teessuma lafaatiin miidhaan qaqqabuu mala
Akeekkachiisi hattattamaa eenyu fa'iif kenname?
Daandiin Xiyyaaraa US maanuwaalii akkaataa itti fayyadama xiyyaara kanaa ibsurratti tuuta hojjettoota xiyyaara kanaaf akka leenjii kennu akeekkachiifamee ture.
Abbaan Taayitaa Aviyeeshinii Federaalaa akka jedhetti yeroo sana odeeffannoon waa'ee xiyyaara kanaa to'attoota aviyeeshinii biyyaalessaatti darbee ture.
Kan eegamee ture warri aviyeeshinii hoogganan odeeffannoo kana balaliistota yookiin pilot'f ni dabarsu kan jedhuudha.
Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaallee odeeffannoo waa'ee miira dubbistuu yookiin sensor irratti argatee balaliistota xiyyaaraaf dabarseera jedhee akka abdatu ibseera dabbaati oomisha xiyyaara kanaa.
Deebiin Boeing maal?
Boeing ibsa Dilbata kaleessaa baaseen gareen teekinikaa gaaffii dhiyaaterratti hundaa'uun hooggansa Boordii Geejjibaa Biyyaalessaa US jalatti deggersa barbaachisaa gochuuf akka jedhu beeksiseera.
Gadda itti dhagahame kan ibse Boeing waan barbaachisu maraan gareen hojjettoota Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa akka deggerus beeksiseera.
Gosi xiyyaaraa 'Boeing 737 Max' jedhamuu gabaa argachuudhaan seenaa kubbaniyyaa Boeing keessatti isa tokkoffaadha, hanga ammaatti biyyoota 100ta'an xiyyaara 4,500 ajajajaniiru.